Petition · Oromia national regional state office of the presidant: Jiijjiirama Tartiiba Qubee Cimsinee Balaalleffanna. Hatattamaan Kan Duraaniitti Hadeebi'u · Change.org
Jiijjiirama Tartiiba Qubee Cimsinee Balaalleffanna. Hatattamaan Kan Duraaniitti Hadeebi'u
Solomon Ungashe started this petition to Oromia national regional state office of the presidant
Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa
Pirezidaantii Oromiyaa, Finfinne
Tartiibi Qubee jijjiiramuu gadda guddaa dhaan dhageenye. Jijjiiramni taasifamuun "barnoota wajjin walqabata" jedhamee himamuun ammoo baay'ee nu kofalchiise.
Addunyaa keessatti Qubee Laatinii kanneen fayyadaman afaanota 132tu jira. Lakkoobsi kun baay'achaa jira malee xinnaataa hin jiru. Afaanota kana hunda keessatti tartiibi qubee A, B, C, ... jedhee Z dhaan xumurama malee qubee kan biraatiin hin jalqabu, qubee kan biraatiinis hin xumuramu.
Kun maal agarsiisa? A, B, C ...Z jedhanii tarreessuun barnoota irratti faayidaa malee kasaaraa akka hin qabne agarsiisa. Kan Afaan Oromoo jijjiiruun Oromiyaa kan kolfaa taasisa, barnootaaf bu'aa argamsiisu hin qabu. Kanaaf hatattamaan akka duraaniitti deebisaa jennee kabajaan isin gaaffanna.
Nuti ilmaan Oromoo afaaniif biyya keenyaaf quuqamanuudha. Gaaffii keenya kana saffisaan jiruudhaan agarsiiftu jennee abdanna.
Oromia national regional state office of the presidant: Jiijjiirama Tartiiba Qubee Cimsinee Balaalleffanna. Hatattamaan Kan Duraaniitti Hadeebi'u
Today: Solomon is counting on you
Solomon Ungashe needs your help with “Oromia national regional state office of the presidant: Jiijjiirama Tartiiba Qubee Cimsinee Balaalleffanna. Hatattamaan Kan Duraaniitti Hadeebi'u”. Join Solomon and 163 supporters today.